Mayelana Nathi - Shanghai Yuanqin Purification Technology Co., Ltd.
Ku-YQ, sikholelwa kusukela ngoSuku Lokuqala ukuthi Ukuvikelwa Komuntu Siqu kufanele futhi kube into ebaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani kubasebenzi bayo, njengoba abasebenzi beyimpahla ebaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani.Umgomo wethu kusukela ngoSuku Lokuqala ukugxila ekuhlinzekeni amakhasimende ethu ngochwepheshe kakhulu, abasezingeni eliphezulu. ikhwalithi kanye nezixazululo zokuvikela ukuphefumula ezisezingeni eliphezulu njengokuthi wonke umsebenzisi wemikhiqizo yethu akwazi ukufeza imisebenzi yakhe ngokuzethemba azi ukuthi avikeleke kahle.
Siyakwamukela ukuthi ufinyelele ku-YQ, usazi, futhi uhlanganyele nathi ukuze ugxile empilweni nasekuphepheni kwawo wonke umuntu oseduze kwakho isimo sezulu angabasebenzi bakho noma amalungu omndeni wakho. Ngokubambisana singavikela indawo yethu, songe amandla futhi sidale umhlaba ohlanzekile.
I-YQ itholakala kalula e-Shanghai, isikhungo sochungechunge lwabahlinzeki. Izinsiza zethu zokukhiqiza zihlanganisa indawo cishe. 6,000 SQM enabasebenzi abaqeqeshwe kakhulu abangaphezu kwe-100, imigqa yokukhiqiza eyi-12 ne-semi-automated engu-20 yokukhiqiza. Ubuningi bethu. umthamo wokukhiqiza ungafinyelela kumaski angama-300,000 ngosuku ngomkhiqizo wonyaka wamamaski angaphezu kwezigidi eziyi-100. Izakhiwo zethu zokukhiqiza ezesimanje futhi zihlangabezana nezidingo zomhlaba wonke zokuvikelwa kwemvelo, impilo kanye nokuphepha. I-YQ yamukela uhlelo oluphelele lokuphatha oluhlanganisa zonke izici zezinqubo zethu zokukhiqiza. Okuyisisekelo salolu hlelo lokuphatha ithimba lochwepheshe abaqeqeshwe kakhulu bokulawula ikhwalithi elisebenzisa amathuluzi asezingeni eliphezulu (okungukuthi 8130 kanye nemishini yokuhlola engu-8130A) kanye namasu okusebenzisa ngempumelelo izivumelwano zokulawula ikhwalithi ukuze kuqinisekiswe ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana nazo zonke izidingo ezimisiwe.
Umgomo wethu uwukuhola ubuchwepheshe bokuhlanza bokuphefumula okunempilo. Ukuze kuthuthukiswe imaski yokuzivikela yekhwalithi ephezulu esebenza kahle kakhudlwana, enethezekile, futhi enobungani bemvelo, ithimba lethu le-R&D alilokothi liyeke ukuqamba izinto ezintsha nokuthuthukisa ubuchwepheshe obukhona namandla okulawula inqubo. Ngenxa yalokho, siyakwazi ukuhlinzeka ngemikhiqizo namasevisi ekhwalithi ephezulu kumakhasimende ethu emhlabeni wonke. Okokugcina, siyakwazi nokuhlinzeka ngemikhiqizo yokuvikela ukuphefumula eyenziwe ngokwezifiso uma siyicela.
Ithimba locwaningo nentuthuko
Siyakwamukela ngokuzithoba ekuhlanzweni okude kwe-qin, qonda ukuhlanzwa kwe-qin, uhlanganyele ekuhlanzeni okude kwe-qin.
Hlanganyela nathi ekubekeni abantu kuqala, ugxile kwezempilo kanye nokuphepha emsebenzini kwawo wonke umsebenzi nelungu lomndeni, ukuvikela indawo ezungezile, ukonga amandla nokuvikela imvelo, nokudala umhlaba ohlanzekile.
Isikhungo sobuchwepheshe benkampani sinesisekelo esiqinile, ithimba lezobuchwepheshe elinolwazi, elinobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza nobuchwepheshe.
·Amakhono ayisisekelo ·Unolwazi ·Ubuchwepheshe obuphambili
Ilayisensi Kazwelonke Yokukhiqiza Izimboni
Isitifiketi Sobunikazi Bokuklama
Isitifiketi se-LA Mark of Personal Protective Equipment